Olona folo naratra tamin'ny savorovoro mahery vaika teny amin'ny fiaran-dalamby an'ny Komuter Tokyo
Home » Lahatsoratra farany farany » Crime » Olona folo naratra tamin'ny savorovoro mahery vaika teny amin'ny fiaran-dalamby an'ny Komuter Tokyo
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Vaovao Mafana Japon • Vaovao • Fitsangatsanganana an-dalamby • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Olona folo naratra tamin'ny savorovoro mahery vaika tao amin'ny fiaran-dalamby an'ny Commuter Tokyo
Niteraka fikorontanana lehibe teo amin'ny lalamby Odakyu ity tranga ity, ary mihantona sy midina ny zotra amin'ireo gara roa voakasik'izany.
Lehilahy iray manana antsy no nandeha tamin'ny tsindron'antsy tamin'ny fiaran-dalamby Tokyo.
Tamin'ny zoma lasa teo no nitranga ny fanafihana tany amin'ny lalamby Electric Odakyu.
Naratra mafy ny iray tamin'ireo niharam-boina rehefa voatsatok'antsy imbetsaka.
Lehilahy iray no tazomin'ny polisy anio alina rehefa avy nandeha a tsindrona antsy amin'ny làlan'ny Railway Tokyo Odakyu Electric fiarandalamby komuter.
Tsy latsaky ny folo ny olona naratra tamin'ilay fanafihana nitranga ny zoma lasa teo Tokyoambanivohitra atsimo andrefan'ny Setagaya.
Olona folo naratra vokatry ny fanindronana antsy teo amin'ny fiaran-dalamby komuter tany Tokyo
Raha nanambara ny tatitra voalohany fa olona efatra no naratra tamin'io fanafihana io, dia nitombo ho XNUMX ny isan'ireo niharam-boina, araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana mitanisa ny sampana mpamono afo ao Setagaya.
Ny sampana mpamono afo ao Tokyo dia nilaza fa ny sivy amin'ireo mpandeha naratra 10 dia nentina tany amin'ny hopitaly akaiky, raha ny 10 kosa afaka nandeha lavitra. Samy nahatsiaro tena avokoa ireo naratra, hoy ny tompon'andraikitra ao amin'ny sampana mpamono afo.
Naratra mafy ny iray tamin'ireo niharam-boina rehefa voatsatoka antsy imbetsaka, hoy ny fampitam-baovao avy any an-toerana mitanisa loharanom-baovao avy amin'ny polisy.
Vantany vao vita ny tranga dia nijanona teo anelanelan'ny gara roa ny fiaran-dalamby, ary voalaza fa nitsambikina ary nitsoaka an-tongotra ilay olona. Tsy fantatra mazava hoe iza no nisintona ny freins vonjimain'ny fiarandalamby.
Nandositra ny fiaran-dalamby ilay voarohirohy, na ny antsy na ny telefaonina navelany.
Niteraka fanenjehana iray ity lehilahy ity, niaraka tamin'ny lehilahy ahiahiana, manodidina ny 20 taona, rehefa avy notazonin'ny polisy izy rehefa avy nitodika tany amin'ny fivarotana fivarotana tsy lavitra teo, nilaza tamin'ny mpitantana fa izy no tompon'antoka tamin'ny fanafihana. Mbola tsy fantatra ny antony nahatonga ny mpanafika.
Tsy fahita firy ny asan-dahalo mahery setra any Japon, ary ny fampandrenesana dia miaraka amin'ny renivohitra miaraka amin'ny fampandrenesana avo lenta rehefa mandray ny Lalao Olaimpika.
Oktobra 20, 2021 ao amin'ny 13: 39
Oktobra 20, 2021 ao amin'ny 13: 25